वास्तु अनुसार कुन दिशामा सिरानी गर्दा सुख, समृद्धि, शान्ति पाइन्छ ? – Nepal Japan
Friday 5, June 2020
नेपाली समय : 08:56:33
जापानी समय : 12:11:33
वास्तु अनुसार कुन दिशामा सिरानी गर्दा सुख, समृद्धि, शान्ति पाइन्छ ?
7 June, 2019 15:27 | बिचार | comments | 99150 Views
– हरिप्रसाद भण्डारी –
मानिसले आफ्नो जीवनको करिब एक तिहाई भाग सुतेर नै बिताउँछ । त्यसैले दैनिक जीवनमा खाना, पानी, आवासका साथै निन्द्राको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ र यदि व्यक्तिलाई निन्द्रा लागेन भने उ अस्वस्थ हुन्छ ।
आरामदायी निन्द्राको अभाव भएमा उसको सोचाई, काम गराई एवं निर्णय क्षमतामा बिचलन आउनेछ । अर्काेतर्फ आरामदायी निन्द्राले हामीलाई स्वस्थ र सुखी जीवन जिउन सहयोग गर्छ । वास्तु अनुसार हाम्रो वरपर निरन्तर सकारात्मक र नकारात्मक उर्जाको प्रभाव निरन्तर भईरहेको हुन्छ । बास्तु अनुसार शयन कक्ष र शिराने राखेको दिशा ले उसको आरामदायी निन्द्रा एवं स्वस्थ जीवनमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।
वास्तुशास्त्रले हाम्रो सहज एवं आनन्ददायी निन्द्राका लागि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गरेको हुन्छ । अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने धेरै मानिसहरु आरामदायी निन्द्र्राको अभावमा पिडित बन्न पुगेका छन । धेरै ठुलो घर अनेपू सुख सुबिधा भएपनि मानिसहरु राम्ररी निदाउन सकेका छैनन । जसको परिणाम स्वरुप मानिसमा डिप्रेसन लगायत अन्य गम्भिर शारिरिक तथा मानसिक समस्या देखिएका छन । यस्तो अवस्थामा वास्तुका केहि सामान्य मान्यताहरु लाई व्यावहारमा लागु गर्न सके स्वस्थ र आरामदायी निन्द्राका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
वास्तु अनुसार हाम्रो शिरानेको दिशा र सुताईको अवस्थाले महत्वपुर्ण असर पुर्याएको हुन्छ । गलत दिशातर्फ शिराने भएमा स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न समस्याहरु देखा पर्दछन । वास्तु अनुसार आरामदायी निन्द्राका लागि सिराने पूर्व तिर राखिनु पर्छ । पूर्वतिर सिराने राख्न नमिल्ने अवस्था भएमा दक्षिण तर्फ पनि शुभ नै मानिन्छ । जुन व्यक्ति पूर्व वा दक्षिण सिराने पारेर सुत्छ उसले सकारात्मक उर्जा प्राप्त गर्दछ । उसको सुतेको अवधिमा रक्तसञ्चार प्रक्रिया प्रभावकारी रहन्छ । यसबाट निन्द्रा त सुखद बन्छ नै विहान ओछ्यानमा विउँझदा समेत आफुलाई स्वस्थ र हलुका महसुस हुन्छ ।
ओछ्यानमा व्यक्तिले कदापी पनि सिराने उत्तर तर्फ बनाउनु हुँदैन । पृथ्वीको उत्तर र उत्तर पश्चिम दिशा तर्फ कडा चुम्बकिय क्षेत्र रहेको हुन्छ । उत्तरी क्षेत्रबाट कडा चुम्बकिय किरण हरु को निरन्तर प्रवाह भई रहेको हुन्छ । व्यक्तिको उत्तर तर्फको भाग शिर र पृथ्वीको चुम्बकीय शक्ति बिच टकराव उत्पन्न हुन सक्छ । यसले व्यक्तिको शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थमा बिचलन ल्याउँछ । विशेष गरि राती निन्द्रा नलाग्ने, ऐठन हुने, निन्द्रामा बर्बराउने, डरलाग्दो सपना देख्ने एवं गहिरो निन्द्रा नपर्ने समस्या देखिन सक्छ । रक्तसञ्चारमा समस्या भई उच्च वा न्युन रक्तचापको समस्या देखिन सक्छ । कोलेष्ट्रोल बढेर गम्भिर स्वास्थ्य समस्या देखिनेछ ।
हाम्रो भान्साकोठा कस्तो हुनुपर्छ ? वास्तशास्त्रीको सुझाव यस्तो छ
वास्तु अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा लाई वास्तु अनुसार आरामदायी निन्द्रा र स्वस्थ्य जीवन शाली दिशा मानिन्छ । उत्तर पूर्वबाट आएको सकारात्मक उर्जा यहि दिशामा संग्रह भएको हुन्छ । घरमूलीहरुले यहि दिशातर्फ शयन कोठा बनाउनु शुभ हुन्छ । यस स्थान मा शयन कक्ष भएमा घरका हरेक पक्षमा नियन्त्रण रहन सक्छ । आईपरेका चुनौतीहरुको डटेर सामना गर्नै उत्साह भई रहन्छ ।
नव विवाहित दम्पतीका लागि घरको दक्षिण पश्चम दिशा तर्फ हुनु उत्तम हुन्छ । उत्तर पुर्व र दक्षिण पूर्व तर्फ कदापी अन्यथा गर्भ रहन समस्या एवं गर्भ खेर जाने सम्भावना बढि हुन्छ । पतीपत्नीले दक्षिण दिशा तर्फ सिराने पारेर शयन गरेमा स्वस्थ, सुखी र सकारात्मक सम्बन्ध कायम हुन्छ । वास्तु अनुसार व्यक्तिले निम्न दिशा तर्फ सिराने पारेर शयन गर्दा निम्न परिणाम देखिन्छ ।
उत्तर तर्फ – स्वास्थ्य र धनको नाश
दक्षिण तर्फ – सुख, शान्ती र समृद्धि बढ्छ ।
पश्चिम तर्फ – चिन्ता, अल्छि र भद्दा शरिर
पूर्व तर्फ- सुख, शान्ती र समृद्धि
हाम्रा धेरै नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनी हरुको आफ्नो घर छैन । अरुको घरमा भाडामा बस्दा वास्तु अनुसार सबै कुरा लागु गर्न सम्भव नहोला। त्यसैगरि बिदेशमा कामदारका रुपमा रहनु हुने दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरु जहाँ एउटै कोठा वा हलमा सबै खादिएर सुत्नु पर्ने हुन सक्छ । तर पनि धेरै कुरा लागु गर्न नसकेपनि कमसेकम उत्तर तर्फ सिराने नपार्नु उत्तम हुनेछ ।
हाम्रो शरिरमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह र आरामदायी निन्द्राका लागि वास्तु अनुसार यस्ता प्राकृतिक कुराहरु लाई ख्याल गरि दैनिक जीवनमा लागु गर्न सके हामी सँग नकारात्मक उर्जा लाई प्रतिरोध गर्ने र सकारात्मक उर्जा ग्रहण गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ । अनि निन्द्रा आरामदायी हुनुका साथै हाम्रो शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पनि सबल रहन्छ ।
(वरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद ज्यो.पं.हरिप्रसाद भण्डारीलाई +९७७– ९८४२२१९७३५)
दलित भनेर राजनीति गर्नुको साटो पुख्र्यौली सीपलाई उद्योगमा बदलेको भए…
यो बजेटले नेपालीको जीवनस्तर झन घटाउँछ
कोरोना कहरमा हराएको मधेशी दल
नेपालको वास्तविक नक्सा यथाशीघ्र संविधानकृत गरियोस
नेपाललाई कोरोनाको महामारीबाट जोगाउने उपाय
अनलाइन पठनपाठन : बालबालिकालाई थप जागरुक बनाउने नयाँ अवसर
सीमा अतिक्रमणका तथ्य
कोभिड– १९ र यसले बच्चामा परेका असरहरु
प्रधानमन्त्रीज्यू यत्ति काम गरिदिनुस् हामी जयजयकार गरौंला !
क्वारेन्टिनमै दुई महिलाले जन्माइन शिशु
कोरोना भाइरसबिरुद्धको खोपका लागि जापानले ३० करोड डलर दिने
नेपालीलाई फर्काउन एनआरएनएका सबै शाखा तयारी अवस्थामा
प्रदेश २ सभाका पाँच मर्यादापालकलाई कोरोना संक्रमण : प्रदेशसभा स्थगित
ट्रम्पले “झुठो द्वन्द्व” सिर्जना गरेको पूर्व रक्षामन्त्री म्याटिसको आरोप
स्पेनले फ्रान्स र पोर्चुगलसँगको सीमा खुला गर्ने
भक्तपुरमा विदेशबाट आउनेका लागि क्वारेन्टिन र होटलको व्यवस्था
शुक्रबारदेखि उद्धार सुरु : पहिलो खेपमा युएईबाट डेढसयभन्दा बढी ल्याइँदै
बिहिबार थपिए तीन सय ८३ संक्रमित, पाल्पाका मृतकमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न सकिने गरी लकडाउन खुकुलो पार्न सिफारिश
एक साताभित्र एसइई परीक्षाबारे निर्णय गरिने : शिक्षामन्त्री पोखरेल
व्यापारीहरुको एकतर्फी निर्णय- काठमाडौंमा बढेको चहलपहल बहादुरी कि मुर्खता ?
क्वारेन्टाइनबाट घर गएका युवकको घाँटी घ्यारघ्यार भएको १५ मिनेटमै मृत्यु
तातोपानी नाकाबाट उठ्यो एक अर्ब २७ करोड २६ लाख राजश्व
गण्डकी प्रदेशमा विहानै भेटिए १६ जना संक्रमित
चक्रवात ‘निसर्ग’ को प्रभाव : देशभर बदलीसँगै वर्षाको सम्भावना
जापानको चार्टर फ्लाईट यात्रुलाई आहत कि राहत ?
भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश फर्कने नेपालीलाई दूताबासको सूचना, हजारौं विद्यार्थीहरु हवाई उद्धारको प्रतिक्षामा
बाहिरबाट हेर्दा कुखुराको खोर : भित्र गाँजाको भण्डार
टोकियो महानगरबासीमा शतर्क रहन आव्हान, बार र नाइट क्लबका कारण चिन्ता